Hayadda Horn Center for Criminal Justice Advancement (HCCJA) Oo Ka Digtay Khataraha Ka Iman Kara Maamul Xumada Iyo Sharci La’aanta Hawlaha Shidaal-Baadhida/Qodista Ee Ka Socota Somaliland. | Salaan Media
Hayadda Horn Center for Criminal Justice Advancement (HCCJA) Oo Ka Digtay Khataraha Ka Iman Kara Maamul Xumada Iyo Sharci La’aanta Hawlaha Shidaal-Baadhida/Qodista Ee Ka Socota Somaliland.
Arbaca, August 28, 2013 (SM)-Hayadda Horn Center for Criminal Justice Advancement ee fadhigeedu yahay dalka maraykanka ayaa manta ka soo saartay warsaxaafadeed ku aadan hawlaha shidaal baadhista iyo qodista ee ka socda Somaliland. War saxaafadeed uu ku saxeexan yahay Gudoomiyaha Hayadda Horn Center for Criminal Justice Advancement Mr. Maxamed-Nasir M Dhoore ayaa u dhignaa sidan:
Ugu horayn waxaan halkan ka salaamayaa saxaafada markasta u heelan tabinta iyo gaadhsiinta wararka saxda iyo xaqiiqada ku salaysan ee markasta ay ummadu ka hesho. Waxaan sidoo kale Salaamayaa dhamaan ummada reer Somaliland iyo Guud ahaanba inta afsomaliga ku hadasha. Hadii aan u soo noqdo dulucda mawduucan, waxaan ka war haynaa in Somaliland uu ka socdo mashruuc lagu baadhayo shidaal. Ugu horayn waxaan halkan ka cadaynayaa in loo baahan yahay in shidaal loo soo saaro dalka si horumar loo gaadho. Hase ahaatee, waxa arintaasi ka horeeya in marka hore la diyaariyo masrixii iyo wadadii lagu soo saari lahaa (drilling policy and platform). Waxa aan ka war qabnaa in colaadaha ugu da’da weyn aduunka ay ku salaysan yihiin is maandhaaf iyo is mari waa ka dhashay maamulida khayraadka dabiiciga ah. Hadii aynu ka eegno dhinaca sharciga, Somaliland hada diyaar uma aha in la soo saaro shidaal sababa badan awgood oo ay ka mid yihiin
1. Legislative law: waa sharci baarlamaan sameeyay- Somaliland kama jiro sharci ay soo samaysay (drafted) xukuumadu oo loo gudbiyay baarlamaanku si uu u ansixiyo. Cilmi baadhis ay samaysay hayadda Horn Center for Criminal Justice Advancement (HCCJA), waxay ogaatay in aduunka marka lala soo baxayo khayaraadka dabiiciga ah (Natural Resources) in marka ugu horaysa la soo hordhiga baarlamaanka sharcigii iyo nidaamkii lagu hagi lahaa khayraadkaas. Baarlamaanku waa in uu u saaro gudi hoosaadka baarlamaanka ee qaabilsan khayraadka dabiiciga ah (Sub-committee on Natural Resources). Waa in ay gudidaasi heshaa taageero iyo talo sharci (legal Support and Consultation) waana in ay baarlamaanka soo hordhigaan warbixintooda u danbaysa. Waa in ay ku jirtaa warbixintaa wax yaabaha hoos ku qorani;
a. Cida maamulaysa baadhida iyo qodida shidaalku
b. Tirada shirkadaha loo ogolyahay in ay baadhaan/qodaan shidaalka
c. Maasuuliyada faa’iida iyo khasaaraha ka dhalan kara qodida/baadhida shidaalka
d. Cida awooda u leh in ay dabagal ku samayso iyo maamusho shirkadaha (regulating body) si aanay shirkadahaasi ugu xadgudbin dhulka
e. In la sameeyo hayad ilaalisa tayada si looga hortago khatarta kimikaal ahaaneed (pollution regulation and control)
f. In la shaaciyo saamiyada shirkadaha iyo dawladu ay kala leeyihiin
g. In la shaaciyo saamiga goboloda degmooyinka iyo waliba xuquuqda muwaadiniinta barakacu ku dhacayo
h. In la shaaciyo mudada ay shirkadahaasi ka shaqaynayaan kala qaybsiga faa’iidada
i. In la sheego lana shaaciyo shuruudaha shirkadaha ka shaqayn kara qodida iyo baadhista shidaalka
j. In la qeexo cida lala xisaabtamayo hadii wax dhibaato ahi dhacdo ha noqoto muwaadiniinta ama infaaronmentiga (environment) iyo wixii dhaawac ee kale ee dhacaba (Collateral Damage).
k. In la sameeyo gudi gaar ah oo ka talo bixisa maamushana shirkadaha iyo siinta liisanada.
l. iyo in la shaaciyo cida leh shirkadaha haday muwaadiniin tahay iyo haday ajaanib tahayba
2. Administrative Law: waa sharciga maamul ama shaqo, waxaana sameeya hayadaha ama cid kasta oo markaa arimo maamul iyo maarayn gacanta kula jirta. Waxa xaqiiqo ah in aanay Somaliland lahay sharcigaas maanta khaasatan marka la eego xaga ka faa’iidaysiga khayraadka dabiiciga ah. Si loo maamulo looguna guulaysto hawlaha waa in la sameeyaa nidaam siyaasadeed iyo dhabihii lagu maamuli lahaa qodista/baadhida shidaalka (Policies and Procedures) oo ay ka mid yihiin;
a. Sharcigii ama siyaasadii lagu hagi lahaa shaqaalaha
b. Sharciga ama siyaasadii guud ee lagu maamulayo shirkadaha iy
c. Dhamaanba siyaasadii iyo strategiyadii lagu maamuli lahaa qaybaha kala duwan ee hawl-maalmeedka inta lagu jiro hawlaha shidaal baadhista iyo qodista.
Waxa iska cad in aanu jirin haba yaraatee nidaam sharci oo loo soo maray baadhista iyo qodista shidaalka Somaliland isla markaana ay suuq madow ku heshiiyeen Xukuumada/Shirkadaha iyo shaqsiyaad dano gaar ah lehi. Waxa cad in ilaa intii ay Xukuumadani gacanta ku qabatay talada dalka uu nidaamkii dawladnimo iyo sharcigii iyo kala danbayntii ay gacanta ka sii baxaysay. Waxa cad in ay xukuumadani kaga mashquushay dawladnimadii in ay qolmadow la gasho hantidii iyo khayraadkii umada suuq madowna kaga xaraashayso shirkado aan la garanayn. Waxa marag ma doonto ah in sharciyadii wadanka laga dul-talaabsaday oo aan lagu dhaqmin. Waxa hayada Horn Center for Criminal Justice advancement ka digaysaa qalalaase iyo fad-qalalo laga hor tegi karo.
Hayadda Horn Center for Criminal Justice Advancement waxay soo jeedinaysaa qodobadan hoos ku qoran;
1. In la sameeyo sharcigii dastuuriga ahaa (legislative law) ee lagu maamulayay laguna qeexayay ka faa’iidaysiga khayraadka dabiiciga ah oo aan hada jirin.
2. In la sameeyo sharcigii maamul (administrative law) ee lagu maamuli lahaa laguna hawl-geli lahaa hawlaha shidaal baadhista/qodista
3. In la sameeyo wacyi gelin badan lana tuso dadka sidii looga faa’idaysanlahaa
4. In la adkeeyo lana dhiso hayadiihii ilaalinlahaa maamulida hawlaha shidaalka sida tayada, qandaraasyada, shaqaalaha iyo waxyaabo kale oo badan oo muhiim.
Maxamed-Nasir M Dhoore; BA-Law and Justice, MS-Criminal Justice
CEO/President Horn Center for Criminal Justice Advancement